बंगलादेशबाट काठमाडौं उड्न अघि ढाकाको एअरपोर्टबाट यस्तो स्टाटस लेखेर उडेका थिए यो 'युगल जोडी - Online Tamang
बंगलादेशबाट काठमाडौं उड्न अघि ढाकाको एअरपोर्टबाट यस्तो स्टाटस लेखेर उडेका थिए यो ‘युगल जोडी
सोहि विमानमा बंगलादेशबाट काठमाडौका लागि उड्ने क्रममा एउटा जोडीले फेसबुकमा लेखेको पछिल्लो पोस्ट अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल हुँदै गरेको छ ।
ढाकाबाट उड्नुअघि सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेका स्टाटस सार्वजनिक भएका छन् ।
बंगलादेशी नागरिक राजु रहमानले ती यात्रु सकुशल रहुन् भन्ने कामनासहित ट्वीटरमा ती स्क्रिनसटहरु शेयर गरेका छन् । उनले शेयर गरेका स्क्रिनसटमा उल्लेख भएअनुसार ती युगल जोडीहरु कोही हनिमुन त कोही आफ्ना प्रियजनका साथ घुम्न आउँदै थिए । हेर्नुहोस् स्क्रिनसटहरु
Prevअपडेट: कुन देशका कति यात्रु थिए? कहाँ उपचार भइरहेको छ ?
Nextममी म प्लेन चढे भनेकी छोरी छैन ,हस्पिटलमा आफ्नातको भिड -मर्नेको संख्या ५० नाघ्यो , हेर्नुहोस दर्दनाक भिडियो